अहिले संसारको कुनै विधाको विद्वान्लाई पनि जवाफ थाहा नभएको एउटा प्रश्न छः संसारका प्रायः सबै भाग ‘लकडाउन’मा बस्न कति महिनासम्म सम्भव छ ? कतिसम्मको, कस्तो स्थितिलाई ‘सम्भव’ भन्ने प्रश्न त माथिको प्रश्नभित्रै छ।
हाम्रा यी ‘शीर्ष’ तहका नेताहरूमध्ये एकले अर्कालाई किन कहिल्यै सम्मान गर्दैनन्, थाहा छ ? थाहा छ, यिनीहरू किन जहिले मनमुटावमा हुन्छन् ? किनकि, यी सबैलाई आफ्नो सहकर्मी कुनै सम्मानको लायक छैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। यिनीहरूले एकअर्कालाई ‘सम्मान’ गर्ने बेला एउटा मात्र छः सत्ताको जोड–घटाउ !
यहाँ ‘जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ’ भन्ने वाक्य कहिलेकाहीँ अति ‘अशिक्षित’ लाग्छ। जस्तोः कोभिड–१९ ले गर्दा हजारौँ मान्छे मरिसके। अनि ती मृतकका आफन्तले यो राम्रैका लागि भएको हो भन्ने ? ती आफन्त ‘स्वर्ग’ जानका लागि मरेका होलान्, त्यसैले राम्रो भो भन्ने ?
मान्छे पनि अरू जीवजस्तै बाँच्नका लागि संघर्ष गर्ने प्राणी हो; प्रकृतिले अहिले हाम्रो हैसियत सम्झाइदिएको होला। ‘मानवता’ र जे भने पनि अस्तित्वका हिसाबले कुरा उही हो। जीवनको अर्थ छ भने हरेक प्राणी यहाँ हुनुको अर्थ छ; जसरी फूल फुल्नुको छ। नत्र कसैको छैन। मान्छे एक्लैको के अर्थ हुनु !
कोभिड–१९ पछिको संसार र समय यसअघिको समयभन्दा धेरै फरक भइ नै सक्यो। हाम्रो पृथ्वी÷प्रकृतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब फेरिनेछ। पृथ्वीमा मान्छेको उपस्थिति र ब्रह्माण्डसँगको सम्बन्धबारे धारणा अब फेरिइसके। अहिलेसम्म बुझेको भन्दा संसार त अर्कै भैसक्यो। यसको सैद्धान्तिकीकरण अब हुँदै गर्छ।
विगत दुई वर्षमा सार्वजनिक रूपमा केपी ओलीको नामभन्दा खड्गप्रसाद ओलीको प्रयोग बढेको छ, जसरी प्रचण्डलाई समयले छिट्टै पुष्पकमलभन्दा बढ्ता मान्न इन्कार गरेको थियो। राजनीतिमा व्यक्ति अहिले कहाँ उभिएको छ भनेर बुझ्न कहिलेकाहीँ भाषाशास्त्र पनि काम लाग्छ।
मान्छे पृथ्वीमा हुनुको कुनै अर्थ होला ? ब्रह्माण्ड आफैँ स्वचालित होला कि यो सबै चलाउने केही होला ? मान्छेको दिमागको बनोट ब्रह्माण्डको बारेमा कति प्रतिशत बुझ्न सक्ने होला ? यस्ता आधारभूत प्रश्नलाई ‘धत्, यस्ता कुरा गरेर पनि मान्छे काम लाग्छ ?’ भन्ने धेरै हुन्थे। अब फेरि समय फेरियो !